I-china ibhendi ye-earloop band elahlwayo kunye nabenzi | Limeng
Inkampani yethu ingenise izixhobo zemveliso yobuchwephesha kunye netekhnoloji ephezulu yokuvelisa ibhendi yelaptop yendlebe. Eyona nto iphambili ekrwada yi-chinlon kunye ne-spandex. Sinokubonelela ngebhendi yeluphu enemibala emininzi. Le band yendlebe iluhlaza umbala omhlophe, kwaye ububanzi bungu-3mm wokujikeleza. Kufanelekile ukuba balahle uhlobo tyaba zonyango okanye uqhaqho ubuso iimaski.
Ngokwesiqhelo, ibhanti yelokhwe yendlebe yemaski yobuso, amandla ayo yi-17 N.
Sineengxowa okanye iipakethe zeroli
Ukuhambisa ngenqanawa kungenziwa ngumoya womoya ngokukhawuleza.
Ukukhetha iimaski ezilahlwayo, kungcono ukhethe iimaski zotyando ezilahlwayo, kwaye amagama eemaski zotyando aya kuboniswa kwiphakheji.
Imaski yotyando yezonyango ilungile kakhulu ekuthinteleni ukuchitheka kolwelo, phakathi kwayo apho isiphumo sokuhluza amasuntswana amakhulu kunama-microns ama-5 emoyeni angaphezulu kwama-90%. Ngokwekhono lokuthintela ukusasazeka kwebhaktiriya kunye nethontsi lentsholongwane, iimaski zoqhaqho zilungile kakhulu.Ingathintela intsholongwane kunye neentsholongwane ukuba zihlasele indlela yokuphefumla ngokufanelekileyo, zibe nefuthe lokukhusela. umaleko wokungangenwa ngamanzi, umaleko ophakathi ngumaleko wokucoca ulwelo, ulwahlulo lwangaphakathi luluhlu lokuthuthuzela, zihlala zingahambisani nezinto ezibonisa ukungabikho komzimba, kwaye kukho neempumlo kunye nesidlele kunye neendlebe zeendlebe, imaski ilunge ngakumbi kulusu. ixesha, kuyimfuneko ukunxiba imaski ngokuchanekileyo, ukuze udlale ngcono indima yokhuselo.
Inoveli Coronavirus usulelo lubaluleke kakhulu kulo nyaka. Kuphela ukuba ngaba umntu ngamnye kuthi ngokuzazi nokuziphatha ukwenza umsebenzi olungileyo wokuzikhusela, ukuhlamba izandla rhoqo, ukungena umoya rhoqo, ukugcina umgama ekuhlaleni kunye nokuwenza umkhwa wemihla ngemihla kunye nokuziphatha okuqinisekileyo kwezempilo esinokuthi siluthintele usulelo kwinoveli yeCoronavirus.
Isigqumathelo esilahlwayo sezonyango okanye imaski yotyando kufuneka inxitywe kwezi meko zilandelayo
1. Ibhasi, iteksi, umqeqeshi, uloliwe nabanye abasebenzi bezithuthi zikawonkewonke nabakhweli.
2. Bonke abasebenzi kwiindawo zikawonke-wonke apho abantu bathanda ukuhlanganisana, ezinjengeevenkile ezinkulu, iivenkile ezinkulu, iiholo zemiboniso, iimyuziyam, iindawo zokuzilolonga, iiholo zemiboniso bhanya-bhanya neendawo zemidlalo yeqonga, iiholo zendibano, iindibano zocweyo, iivenkile ezikwi-Intanethi, iilifti zeveni njalo njalo.
3. Bonke abasebenzi kwiindawo ezingaphandle ezifana neepaki kunye nezikwere ezingenakho ukugcina umgama okhuselekileyo eluntwini ongaphezulu kwemitha enye.
4. Abasebenzi nabasebenza ezivenkileni, kwiivenkile zokutyela, kwiiholo zokutyela, kwiihotele, kuzo zonke iintlobo "zeminyango emincinci", iidesika zokwamkela iindibano nakwezinye iindawo.
5. Abasebenzi basesibhedlele abafuna unyango, ukutyelela okanye ukukhapha.
6. Abaphambukeli kunye nabanikezeli beenkonzo kumakhaya abalupheleyo, amakhaya entlalontle, iintolongo kunye namaziko empilo yengqondo.
Nxiba iimaski ukukhusela mna nawe
Egqithileyo Ukulahlwa kwemaski yobuso kwezonyango
Okulandelayo: Ezilahlwayo intsholongwane isampulu tube
IChinlon Spandex Earloop
I-Earloop elahlayo yobuso beMask
Ezilahlwayo Elastic Band Earloop
Ubuso beMask Earloop
Imaski yobuso kwindlebe elahlwayo